Dacwad oogaha ICC oo dalabaday in la soo xiro Qadaafi iyo wiilkiisa – SBC
Dacwad oogaha ICC oo dalabaday in la soo xiro Qadaafi iyo wiilkiisa
Hague:- Dacwad soo oogaha maxkamada Danbiyada Dagaalka ee ICC Luis Moreno OCampo ayaa waxaa uu bilaabay in uu shaaca ka qaado qaar ka mid ah cadaymaha uu u hayo shaqsiyaadka Libyaanka ah ee maxkamada ICC uu kiiskoodu yaalo.
Mr Ocampo ayaa ka dalbaday garsoorayaasha Maxakamdda in la soo saaro amar lagu soo xirayo madaxweyme Qadaafi iyo wiilkiisa Seyful Islaam iyo madaxa mukhaabaraadka dalka Libya C/della Sanuusi.
Ocampo ayaa carabaabay in uu hayo cadayn la isku halayn karo oo ay siiyeen hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha .
Dacwad soo oogaha Maxkamada ICC ayaa doonaya in uu Marqaati ahaan u isticmaalo cadaymaha iyo marqaatiyada ay hay’adahaas iyo gudiga xaqiiqa raadiska ee ka socda QM ay u so gudbiyeen si danbiga loogo oogo saddexda Shaqsi ee Libyan-ka ah Sida lagu Muujiyay Dikumiintiyo uu soo saaray.
Moreno ayaa ku nuuxnuuxsaday in cadaymaha uu shaaca ka qaaday aysan qatar ku ahayn dadka marqaatiyada ah iyo dadkii ay waxyeelaada ka soo gaartay dagaalka aan dhamaadka lahayn ee ka socda dalka Libya.
Dhanka kale afhayeen u hadlay xukuumadda Libya ayaa sheegay in tani ay muujinayso sida dowladaha reer galbeedku ay ugu fulinayaan ajendayaashooda wadamada ku yaal qaafar Africa.
Dowladda Libya ayaa kamid ah dalalka aan aqoonsanayn sharciyadda maxkamadda ICC , balse qaraarka maxkamadda ayaa u muuqda mid lamid ah tii madaxweynaha dalka Sudan Cumar Al-bashiir oo dalkiisu uusan xubin ka ahayn maxakamadda ay u jartay amar lagu soo qabanayo sanaddii 2008.